novembre 2014 – filazantsaramada
Mihobia ho an’i Jesosy Kristy Ireo vehivavy voafonja eny amin’ny Fonjaben’Antanimora no nahazo ny anjara fifaliana nentin’ny Feon’ny Filazantsara ho amin’izao ankatoky ny fankalazana ny krismasy izao; raha toa ka ny voafonja lehilahy no nahazo izany hatrizay. Fifaninanana rindran-kira ara-pilazantsara nampitondraina ny lohateny hoe: « MIHOBIA 2014 » no natolotra ho azy ireo, ka natomboka ny 04/11/14 […]
Publié parfilazantsaramada novembre 28, 2014 novembre 28, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Voafonja vehivavy (Antanimora): Fifaninanana Rindran-kira ara-pilazantsara
«Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: « Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah » (Isa. 61. […]
Publié parfilazantsaramada novembre 28, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPANAFAKA TAHAKA AZY
« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » Genesisy 3:16 Fifaliam-be teo amin’ny fiainan’ny malagasy ny fananana taranaka. Aminy dia fitohizanaina ireny, no sady fameloma-maso ny anaran-dray aman-dreny. Noho izany, tsy […]
Publié parfilazantsaramada novembre 21, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO
Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)
Manambara ny famonjena ny Tenin’Andriamanitra Anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka tamin’ny taona 2012 ny FJKM Peniela Ambodifasina. Amin’ny alalan’ny FSMI na « Cours Biblique par Correspondance » sy ny « Film débat » moa no iompanan’izany fiaraha-miasan’ny roa tonta izany. Koa ny Alahady 02 Novambra 2014 izay Alahadin’ny zanak’Ampielezana no nanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana […]
Publié parfilazantsaramada novembre 20, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)
« Koa indro ny fahamoram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasaro-pony amin’izay lavo dia fahasaro-po; fa aminao kosa dia fahamoram-panahin’Andriamanitra, raha maharitra ao amin’ny fahamoram-panahiny hianao; fa raha tsy izany dia hotapahina koa hianao. » Romana 11:22 Ny zava-nisy tany am-piandohana, dia niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra. Tena tsara ny fifandraisana teo amin’Andriamanitra sy ny olona noforoniny. Toy ny paradisa ny fiainan’ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 14, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAHASARO-PO, FAHAMORAM-PANAHY!
FAMPIOFANANA: Fampitaovana ny olona masina Mivelatra amin’ny SP Andrefana sy ny SP Iarivo Avaradrano, eo amin’ny sahan’ny FJKM sy ny Fiangonana METM ankehitriny ny fananganana fiaraha-miombon’antoka (Fiangonana sy ny FF). Tanteraka soa aman-tsara ny 06,07 Novambra 2014 lasa teo, teny amin’ny FOFIKRI Ilafy mantsy ny Fampiofanana antsoina hoe « Fampitaovana ny olona masina » niarahana tamin’ireo Fiangonana […]
Publié parfilazantsaramada novembre 13, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (FF)
« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:8-10 Tanora iray afaka manandrana zava-mahadomelina omen’ny namany azy, […]
Publié parfilazantsaramada novembre 7, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!
“dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy” (Romana 12:5) Amin’izao fotoana izao dia mahatratra aman-jatony ireo Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), indrindra ireo Fiangonana avy amin’ny FLM, FJKM ary METM. Na dia izany aza dia tsy mitsahatra ny mampivelatra hatrany izany fiaraha-miasa izany ny FF. […]
Publié parfilazantsaramada novembre 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fananganana fiaraha-miasa vaovao